Hacks fandoavam-bola amin'ny finday | Martech Zone
Manome safidy fandoavam-bola amin'ny finday ve ny orinasanao? Satria lasa be mpampiasa eny rehetra eny ny serivisy fandoavam-bola sy ny haitao finday, ny fotoana ahafahana mamadika ny vinavina ho lasa mpanjifa amin'ny alàlan'ny safidy fandoavam-bola dia tokony ho eo amin'ny radaranao!
Ny fandoavam-bola amin'ny finday dia mazava ho azy fa ny teknolojia mitombo amin'ny orinasa amin'ny habe rehetra. Tamin'ny 2012 dia nisy $ 12.8 miliara tamin'ny fifanakalozana finday tany Etazonia, tamin'ny taona 2017 dia lasa 90 miliara dolara izany. 48% ny tahan'ny fitomboana fanao isan-taona ao anatin'ny dimy taona! Saingy ny 66% amin'ireo orinasa madinidinika ihany no mampiasa karazana haitao finday, avelao ihany ny teknolojia fandoavam-bola. Moblized
Hitako fa mandoa ny faktiora amin'ny findaiko, fiantohana, mitaingina fiara ary koa mandoa ny fijanonako an-dalambe amin'ny alàlan'ny rindranasa finday sy ny safidin'ny fandoavam-bola amin'ny finday. Tamin'ny sabotsy aho dia nanatrika famoriam-bola izay nisy lavanty mangina nitranga tanteraka tamin'ny fampiasana hafatra an-tsoratra fa tsy zavatra hafa!
Mbola misy tranga iray amin'ny raharaham-barotra rehetra - eo anelanelan'ny fanapahan-kevitra hividy sy ny tena fividianana - izay ialan'ny vinavina maro. Ny fandoavam-bola amin'ny finday dia mety ho tetezana hanafoanana ireo fatiantoka ireo.
Tags: Dwollalevelupfanekena ny fandoavam-bola amin'ny findayfiarovana ny fandoavam-bola amin'ny findayfandoavam-bola amin'ny findaymoblizedfifandraisana akaiky eny an-tsahanfctelefaonaQR CodeskianjaUber
Ny mpanjifa manankarena dia mila fikarakarana mpanjifa ara-tsosialy